घर क्लासिक फुटबॉलर एरिक क्यान्टोना बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
LB उपनामको साथ एक फुटबल लीजेन्डको पूर्ण कथा प्रस्तुत गर्दछ "राजा"। हाम्रो एरिक क्यान्टोना बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातामा ल्याउँदछ।
एरिक क्यान्टोनाको जीवन र उदय। छवि क्रेडिट: CNN, इन्स्टाग्राम र Pinterest।
हो, 1990s मा फुटबल बलको रूपमा म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई पुनर्जीवित गर्नमा उहाँको भूमिकालाई सबैलाई थाहा छ। जहाँसम्म केवल थोरैले एरिक क्यान्टोनाको जीवनी विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
एरिक क्यान्टोना बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
एरिक डानियल पियरे क्यान्टोना फ्रान्सको मार्सिलेमा मे 24 को 1966th दिनमा जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्नी आमा, इलोनोर राउरीच र बुबा अल्बर्ट क्यान्टोनामा जन्मेका तीन छोरामध्ये दोस्रो छोरा हुनुहुन्छ।
बच्चा एरिक क्यान्टोनाकी आमा Éléonore Raurich साथ। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
इटालियन, फ्रान्सेली र स्पेनिश-कातालान जरासहितको सेता जातिको फ्रान्सेली नागरिक मार्सिलेको काइलोज क्षेत्रमा हुर्केका थिए, जहाँ उनी आफ्ना भाइहरू जीन मेरी र जोएलसँगै हुर्केका थिए।
आफ्नो जन्मभूमि मा हुर्केका, क्यान्टोनाको परिवार तुलनात्मक रुपमा गरिब थियो। जे होस्, ऊ खुशीको बाल्यावस्थामा बाँचिरहेको थियो जुन बाध्यात्मक सडक फुटबल र उनीहरूको घर वरपर भूमध्य परिदृश्यको सौन्दर्य सराहनाको साथ थियो।
एरिक क्यान्टोना बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
क्यान्टोना 15 वर्षको उमेरमा, उनले स्थानीय क्लब एसओ कैलोलाइसमा संगठित फुटबल खेल्न शुरू गरे जहाँ उनले गोलकीपरको रूपमा शुरू गरे तर चाँडै नै पत्ता लाग्यो कि कुनै पनि गोलपोस्टको आयामले शोषण रोक्छ।
एरिक क्यान्टोना 15 वर्षको थिए जब उनले स्थानीय क्लब SO Caillolais को लागि खेल्न शुरू गरे। छवि क्रेडिट: Pinterest।
यसप्रकार उनी प्रक्रियाको हरेक बिन्दुको आनन्द लिदै अगाडि घुमे, तर विपक्षी गोल पोष्टलाई केन्द्रको अगाडि रोके। SO Caillolais को लागि 100 भन्दा बढी खेलहरूमा फिचर गरेपछि क्यान्टोनाले क्लब औक्सेरको लागि यात्रा तय गर्‍यो जहाँ उनले पेशेवर बन्ने आशा गरेका थिए।
एरिक क्यान्टोना बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
क्यान्टोना Auxerre लाई 16-वर्ष पुरानोको रूपमा आइपुगेको छ जसले हरेक बिट निर्दोष देखिन्थ्यो। फुटबल प्रोडिजीले दुई बर्षसम्म आफ्नो कामको लागि रेन्कोमा बिताए जबसम्म उनले अन्ततः न्यान्सीमाथि 4-0 लीग जीतको दौरान आफ्नो व्यावसायिक डेब्यू गरे।
पेशेवर पक्ष Auxerre मा एरिक क्यान्टोना को एक चित्र। छवि क्रेडिट: टेलीग्राफ।
त्यस पछि क्यान्टोनाको क्यारियरलाई उनीले अनिवार्य राष्ट्रिय सेवामा पार गर्न सक्षम गर्न एक्सएनयूएमएक्स वर्षमा रोकियो जुन पछि उनलाई मार्टिग्जमा edण दिइयो। यद्यपि सबै क्यान्टोनाको लागि मार्टिग्जमा राम्रोसँग सुरु भए पनि, "एन्ड वेल" एक वाक्यांश थियो जुन अहिलेसम्म उनको क्यारियरको अर्को 1984 वर्षसम्म समेटिएको थिएन।
एरिक क्यान्टोना बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकमा फेम स्टोरी
यो मार्टिग्जमा थियो जब क्यान्टोनाले पहिलो व्यावसायिक स्वभावपूर्ण खेल प्रदर्शन गरे जब उनले टीमका साथी ब्रुनो मार्टिनीलाई अनुहारमा मुक्का हाने। अर्को वर्ष (1988) उनी नान्तेस खेलाडी, मिशेल डेर जकारियनको सामना गर्न सबै कुंगफू गए।
उनको ज्यादतीको रोकथामका लागि आरम्भ गरिएको जरिवाना र निलम्बनको शृ .्खलाले अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकेन किनकि उनी मार्सिले, बोर्डो, मोन्टपेलियर र नाइम्समा अधिक अनुशासनात्मक मामिलामा परेका थिए जहाँ उनले फुटबलबाट 1991 मा पहिलो सेवानिवृत्ति घोषणा गरे।
एरिक क्यान्टोना आफ्नो क्यारियरको राम्रो भागको लागि अनुशासनात्मक मामिलाहरूमा एम्मेड थिए। छवि क्रेडिट: Pinterest।
एरिक क्यान्टोना बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
उसको नजिकको साथी र सबैभन्दा ठूलो फ्यानको सल्लाहमा अभिनय गर्दै - माइकल प्लैटिन, क्यान्टोनाले बुधबार शेफिल्डमा फुटबलमा पुन: वापसी गर्‍यो जहाँ उनको छोटो कडा थियो। त्यसपश्चात उनले केही महिना लीड्स युनाइटेडमा बिताए र क्लबलाई प्रिमियर लिगको उपाधि जित्न मद्दत गरे।
क्यान्टोनाको ठूलो ब्रेक एक्सएनयूएमएक्समा धेरै समय पछि आए जब उनले म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई 1993 बर्षमा उनको पहिलो लिग खिताब जित्न मद्दत गरे। उपलब्धीको साथ, क्यान्टोना लगातार सीजनहरूमा बिभिन्न टीमहरूको साथ प्रिमियर लिग उपाधि जित्ने पहिलो खेलाडी बन्नुभयो।
एरिक क्यान्टोनाले म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई 1993 मा प्रिमियर लिगको उपाधि जित्न मद्दत पुर्‍यायो। छवि क्रेडिट: टेलीग्राफ।
छिटो मिति क्यान्टोना एक अभिनेता को रूपमा मनोरन्जन उद्योग मा आफ्नो व्यापार चलाउनुहोस्। उनको पहिलो अभिनय गिग फुटबलबाट एक 1995 निलम्बन पछि आए जुन उनले फ्रान्सेली कमेडी फिल्म "Le Bonheur est dans le pré" मा रग्बी खेलाडीको भूमिका खेले। उनले पछिल्लो पटक "युलिसिस र मोना" को साथ धेरै फिल्महरूमा अभिनय गरेका छन्। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
एरिक क्यान्टोना बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्धी जीवन तथ्यहरू
आफ्नो फुटबल क्यारियरको जटिलताबाट टाढा, क्यान्टोनाको उनकी पहिलो पत्नी इसाबेलसँग एक कांड मुक्त विवाह भयो जसले उनको दुई बच्चा राफेल र जोसेफिन जन्माए उनीहरू 2003 मा छुट्टाछुट्टै बाटोमा जानु अघि।
अघि बढिरहेको, क्यान्टोनाले अभिनेत्री रचिडा ब्रेक्नीलाई भेट्टायो जब फिल्म 'Outremangeur' सेटमा अभिनय गर्दा। उनीहरू लामो समय पछि डेटि began गर्न थाले र 2007 मा विवाह गर्न गए। तिनीहरूको विवाह एक छोरा एमीरको साथ आशीर्वाद छ।
एरिक क्यान्टोना आफ्नो दोस्रो पत्नी Rachida Brakni संग। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
एरिक क्यान्टोना बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन तथ्य
क्यान्टोनाको पारिवारिक जीवनको बारेमा, उहाँ3सदस्यहरूको तल्लो वर्गको पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ। हामी उसको परिवारको तात्कालिक र विस्तारित सदस्यहरूको बारेमा वास्तविक जानकारी प्रदान गर्दछौं।
एरिक क्यान्टोनाका पिताको बारेमा: अल्बर्ट क्यान्टोनाका बुवा हुन्। उनले फुटबल फुटबलको प्रारम्भिक जीवनको क्रममा मनोचिकित्सक नर्सको रूपमा काम गरे र एक शौकिया चित्रकार हुन थाले। क्यान्टोनाले अल्बर्टलाई जहिले पनि जहिले पनि विश्वको अवलोकन गर्न, यसको सौन्दर्यको कदर गर्न र यसलाई आउने दु: खबाट सिक्ने निर्देशन दिएका छन्।
एरिक क्यान्टोना आफ्नो बुबा अल्बर्ट संग। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
एरिक क्यान्टोनाकी आमाको बारेमा: Éléonore Raurich क्यान्टोनाकी आमा हुन्। उनले क्यान्टोना र उनका भाइहरूलाई हुर्काउन सहयोग गरिन् र क्यान्टोनाको जीवनमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक प्रभाव थियो। उनले उनलाई आत्मविश्वास दिए कि उसले आफूलाई अभिव्यक्त गर्न आवश्यक छ र उसलाई उत्प्रेरित गर्‍यो कि ऊ केहि पनि हुन सक्छ जुन उसले आफ्नो हृदयलाई सेट गरेको छ।
एरिक क्यान्टोनाका भाई बहिनीहरूको बारेमा: क्यान्टोनाका दुई जना भाइबहिनी छ, जेठो भाइ जीन मारीको रूपमा चिनिन्छ र योएल नामको कान्छो भाइ पनि छ। जीन चलचित्र प्रोजेक्टमा सम्मिलित हुनु अघि स्पोर्ट एजेन्टको रूपमा काम गर्थे भने जोएलले अभिनयमा भाग लिनु भन्दा पहिले कम फुटबल क्यारियर पनि पाएका थिए।
एरिक क्यान्टोनाका भाइहरू जीन (बाँया) र जोएल (दायाँ)। छवि क्रेडिट: ट्विटर।
एरिक क्यान्टोनाका आफन्तहरूका बारेमा: क्यान्टोनाका मातृ हजुरबा हजुरआमा पेद्रो रउरिख र फ्रान्सेस्का फर्नास थिए जबकि उनका बुवा हजुरआमा र हजुरआमा क्रमशः जोसेफ क्यान्टोना र लुसिने थ्रीसे फागलिया थिए। क्यान्टोनामा काका र काकीहरू छन् जसलाई अझै चिन्न सकेको छैन, न त उनका भतिजाहरू, भतिजा र भतिजाहरू लेख्नको क्रममा चिनिन्छन्।
एरिक क्यान्टोना बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन तथ्य
व्यापक अनुमानका विपरीत, क्यान्टोनामा मनोवृत्ति समस्या छैन तर व्यक्तित्व जुन धेरैले ह्यान्डल गर्न सक्दैनन्। उसको व्यक्तित्व मिथुन राशिको लक्षणहरू छिटोपन र संवेदनशीलता जस्ता लक्षणहरू प्रदर्शन गर्दछ।
बढी त ऊ भावनात्मक रूपमा धुनमा छ, कल्पनाशील छ र उसको व्यक्तिगत र निजी जीवनको बारेमा विवरण खुला गर्दछ। उसको चासो र शौकहरु बीच समुद्री फुटबल खेल, अभिनय, लेखन र परिवार र साथीहरु संग समय खर्च समावेश छ।
एरिक क्यान्टोना समुद्र तट फुटबल खेल्न मन पर्छ। छवि क्रेडिट: Pinterest.
एरिक क्यान्टोना बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - जीवन शैली तथ्य
के तपाईंलाई थाहा छ क्याटानासँग लेख्ने समयमा Cat 25 मिलियन भन्दा बढीको कुल सम्पत्ति छ? फुटबलर कम अभिनेता मनोरञ्जन मा पूर्ण रूप मा संलग्न हुनु अघि एक खेलाडी को रूप मा आफ्नो सम्पत्ती को नींव राखे।
एरिक क्यान्टोना केही फुटबल महापुरूष मध्ये एक हो जसले रिटायर गरिसके पछि यसलाई ठूलो बनायो। छवि क्रेडिट: व्यक्त.
पौराणिक कथाको विशाल सम्पत्तीको गवाही दिने र उसको खर्च ढाँचामा मसिलाई पुर्‍याउने सम्पत्तिले पेरिसको ट्रेंडी फोन्टेने-सुस-बोइस जिल्लामा उनको £ 2m हवेली समावेश गर्दछ। क्यान्टोना कार स collection्ग्रहको बारेमा धेरै ज्ञात छैन, तर यो विश्वास गरिन्छ कि ऊसँग क्लासिक सवारीको लागि पेन्टन्ट छ जुन उसको शैलीको भाव दिन्छ।
एरिक क्यान्टोना बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
यस चरणसम्म पढ्नु भएकोमा धन्यवाद। यहाँ हामी तपाईंलाई कम ज्ञात तथ्यहरू प्रदान गर्दछौं जुन तपाईंलाई एरिक क्यान्टोनाको बारेमा कहिले थाहा थिएन।
धर्म: क्यान्टोना अझै आफ्नो धार्मिक मान्यता स्पष्ट रूपमा थाहा छैन। न त उनलाई नास्तिक भनेर चिनिन्छ। जे होस्, ऊ अन्य उत्कृष्ट गुणहरू जस्तै सृजनात्मकता, वकालत र फिर्ता दिनेमा धार्मिक छ।
धुम्रपान र मदिरा: उनलाई धूम्रपान र अफ-स्क्रिनको साथ साथै जिम्मेवार रूपमा पिउन दिइन्छ। उसको धूम्रपान गर्ने ढाँचाको नजिक अध्ययनले पत्ता लगायो कि ऊ भ्यागुता र अन्य मनोरन्जन सम्बन्धी शंकुहरूको बिरूद्ध तम्बाकू चुरोटमा टाँसिन्छ।
एरिक क्यान्टोना धूम्रपान र जिम्मेवारि पिउँछ। छवि क्रेडिट: स्पूल र Pinterest।
ट्याटूहरू: पौराणिक कथा फुटबल खेलाडीहरूको पुरानो फसलसँग सम्बन्धित छ जसको लेखनको समयमा ट्याटू छैन। न त ऊ शरीर कला प्राप्त गर्ने पक्षमा नहुनु नै हो किनकि ऊ लामो समयदेखि उसको प्राइममा गएको छ।
नामको अर्थ: के तपाईंलाई थाहा छ एरिक नामको अर्थ "एक" वा "शासक" हो जबकि "क्यान्टोना" फ्रान्सेली मूलको नाम हो जसको अर्थ "धन्यवाद" हो। थप रूपमा, उनी इ England्ल्यान्डमा आफ्नो फुटबल खेल्ने क्षमताका लागि "राजा" उपनाम पाएका थिए।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो एरिक क्यान्टोना बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्क पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।